सूत्र आगत रेखामा देखिन्छ. तालिकामा कक्षको दायरा निश्चित गर्न, माउसको सहायताले आफूले चाहेको कक्षहरू चयन गर्नुहोस्. The अनुकूलन कक्ष सन्दर्भ पनि आगत रेखामा देखिन्छ. थप पारामिटरहरू राख्नुहोस्, यदि आवश्यक भएमा, र क्लिक गर्नुहोस् Apply तपाईँको इन्ट्रीलाई निश्चय गर्नुपर्यो भने. तपाईँ सूत्र सिधै घुसाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई उपयुक्त्त वाक्यसंरचना थाहा छ भने. यो आवश्यक छ, उदाहरणका लागि , तलमा Insert Fields and सम्पादन फाँटहरू सम्बादहरू.
सूत्र विकल्पको सारांश
आधारभूत गणना प्रकार्यहरू
कूल हिसाब गर्नुहोस्.
उदाहरण: <A1> + ८
फरकहरू गणन गर्नुहोस्
उदाहरण: १० - <B5>
MUL वा *
उत्पादन हिसाब गर्नुहोस्.
उदाहरण: ७ MUL ९
DIV वा /
भागफल हिसाब गर्नुहोस्
उदाहरण: १०० DIV १५
आधारभूत कार्यहरू उपमेनुमा
उदाहरण: SUM <A2:C2> A2 देखि C2 को कक्षहरूको मानको योगफल प्रदर्शन गर्नुहोस्
उदाहरण: १५.६७८ राउन्ड २ प्रदर्शन १५.६८
उदाहरण: १० + १५ PHD प्रदर्शन १०.१५
उदाहरण: SQRT २५ प्रदर्शन ५.००
उदाहरण: २ POW ८ प्रदर्शन २५६.००
सूचीको प्रयोगको उदाहरण:
EQ वा ==
उदाहरण: <A1> EQ २ प्रदर्शन १, यदि A१ को सामाग्री २ सँग बराबर छ भने.
NEQ वा !=
उदाहरण: <A1> NEQ २ प्रदर्शन ० (गलत), यदि A१ को सामाग्री २ सँग बराबर छ भने.
भन्दा घटी वा बराबर
उदाहरण: <A1> LEQ २ प्रदर्शन १(सहि), यदि A१ को सामाग्री २ भन्दा कम वा बराबर छ भने.
भन्दा बढी वा समान
उदाहरण: <A1> GEQ २ प्रदर्शन १ (सहि), यदि A१ को सामाग्री २ भन्दा बढी वा बराबर छ भने.
उदाहरण: <A1> L २ प्रदर्शन १ (सहि), यदि A१ को सामाग्री २ भन्दा घटि छ भने.
उदाहरण: <A1> G २ प्रदर्शन १ (सहि), यदि A१को सामाग्री २ भन्दा बढी छ भने.
उदाहरण: ० OR ० प्रदर्शन ० (गलत), कुनै पनि परिणामहरू १ मा (सहि)
बुलियन X Or
उदाहरण: १ XOR ० प्रदर्शन १ (सहि)
उदाहरण: १ र २ प्रदर्शन (सहि)
उदाहरण: NOT १ (सहि) प्रदर्शन ० (गलत)
उदाहरण: MEAN १०|३०|२० प्रदर्शन २०
उदाहरण: MIN १०|३०|२० प्रदर्शन १०
उदाहरण: MAX १०|३०|२० प्रदर्शन ३०.००
उदाहरण: SIN (PI/२)
उदाहरण: COS १
उदाहरण: TAN <A1>
उदाहरण ASIN १
उदाहरण ACOS १
उदाहरण ATAN १
कागजात गुणहरूका लागि चलहरू
तलका कागजात गुणहरू पनि भेटियो फाइल - गुणहरू - तथ्याङ्कहरू तल.
कागजातमा क्यारेक्टरहरूको सङ्ख्या
कागजातमा शब्दहरूको सङ्ख्या
कागजातमा अनुच्छेदहरूको सङ्ख्या
कागजातमा ग्राफिक्सको सङ्ख्या
कागजातमा तालिकाहरूको सङ्ख्या
कागजातमा OLE वस्तुहरूको सङ्ख्या
कागजातमा भएको पृष्ठहरूको जम्मा सङ्ख्या
धेरै परिभाषित मानहरू
० सँग बराबर छैन